Ụbọchị: 2 October 2019
Kotoeli Protocol na Nchekwa Ejiri ụkwụ
Ekwuputala 2019 'Afọ nke estzọ Mgbapụ Mgbapụ' site n'aka Mịnịstrị nke ime. Ezie na ego nke ndị na-adịghị ebute ndị njem na-abawanye site na 100, Kocaeli Governorship, Kocaeli Provincial Security Directorate, Kocaeli Provincial Gendarmerie Command na Kocaeli Metropolitan Municipality [More ...]
Ozi ọma diri egwuregwu ski nke Izmir
Minista oru ugbo na oke ohia Bekir Pakdemirli, Bozdag Ski Center nyochara. Pakdemirli kwuru, "oge oyi gara aga n'ihi ihe ize ndụ oke ga-arụ ọrụ n'oge oge oyi na-abịa," ka o kwuru. Odemis bụ otu n'ime ebe egwuregwu ski dị mma na mpaghara Aegean maka njem nlegharị n'oge oyi. [More ...]
50 belata ọnụahịa Mmepụta na Nchịkọta Robot Investments
Nchịkọta Robot Investment na Mmeputa Mgbakọ 4.0 bidoro. 3 ga-aga n'ihu ruo mgbede Tọzdee nke Ọktọba. Etinye ego na teknụzụ ọhụụ anaghị achọ ego ga-emefu ego buru ibu na oge ntụgharị. nke [More ...]
Ekwesịrị imepụta mpaghara maka nchekwa Defence na Ankara
International Radar na Summit Security Summit - MRBS mepere na Mịnịsta nke ime obodo S Interiorleyman Soylu na Minista Nchebe Mba Hulusi Akar. Na mmeghe nke Nzuko, nkwekorita nkwekorita nke etiti n'onodu mmeghari uzo na mmebe mba nke Minista nke Ochichi. [More ...]
Karşıyaka Ọnọdụ kacha ọhụrụ na iniğli Tram Project
A malitere n’April Karşıyaka Ebumnuche a, nke akwadoro ịgbatị ụgbọ ahụ na Çiğli, ka İzmir Governorship kwadoro ma usoro EIA. Obodo Izmir nke Obodo, mgbe ndị obodo rịọrọ ka agbatịzie ụzọ ụgbọ ala ahụ akpọchiri akpọchi. oru ngo [More ...]
Ndị nnọchi anya nchekwa ọrụ na Kardemir
Ndị nnọchi anya sitere na ndị isi oche nke ụlọ ọrụ nchekwa, Karabük Iron na steel Enterprises (KARDEMIR) AS. KARDEMİR AŞ nabatara ndị nnọchi anya ndị isi oche nke ndị isi oche nchekwa. Mmepụta na itinye ego nke KARDEMİR maka ụlọ ọrụ nchekwa taa [More ...]
Ọrụ Haydarpaşa: 'Haydarpaşa na Sirkeci Train Station Nyefe na IMM'
Haydarpaşa na Haydarpaşa na Sirkeci Train Station maka mbufe Istanbul Metropolitan Munye kwuru nkwupụta ederede. Description; “Anyi na-arịọ ka e nyefee Haydarpaşa na Sirkeci ọdụ na Obodo Obodo Isi Obodo Istanbul na-eji ọnọdụ maka ebumnuche ha na nke ọha! Haydarpasa [More ...]
Sengbọ Esenboğa Subway 1 Ga-efu Ijeri Dollar
Esenboğa Airport Metro 1 Ga-efu Ijeri Dollar: Onye isi obodo nke Ankara Metropolitan Obodo Mansur Yavaş sonyere na Alt One na One Private ”mmemme Fatih Altaylı na Habertürk TV. N'ịkọwa ọrụ 200 na-eme kwa ụbọchị na telivishọn ndụ, Mayor Yavaş gosipụtara ọrụ ya maka Başkent. [More ...]
Ngwa Manisa Kaadị emelitere
MANULAŞ, onye enyemaka nke Manisa Obodo ukwu, kwuputara na emelitere ngwa Manisakart na Storelọ Ahịa Apple. Ngwa kaadi Manisa, nke na-enyere ụmụ amaala aka ịnweta ozi ha chọrọ gbasara ahịrị bọs n’etiti ókèala ọchịchị obodo Manisa na Store Store. [More ...]
Ationgbọ njem ọha na kaadi Elkart Identity 3 Day n'efu
Obodo Konya na-enye ụmụ akwụkwọ ohere iji kaadị ID nwata akwụkwọ ha dị ka Elkart na njem ọha na eze na irite uru site na ụgbọ njem ọha nke 3 na-akwụghị ụgwọ na nke mbụ. Obodo Konya; Mahadum Selçuk, Necmettin [More ...]
Salim Dervişoğlu iji wuo ọdụ ekwentị nke abụọ
A na-ewu ihe nkwụsị ekwentị na Salim Dervişoğlu Street, nke bụ ụzọ ọzọ ga-aga n'okporo ụzọ D-100, nke ụgbọ njem ọha na-eji eme njem na mpaghara Kocaeli nke Karamürsel, Gölcük na Başiskele. Nke mbụ ewuru ụlọ ọha na eze na-akwụsị [More ...]
TransportationPark 12 Ife Mfe si na District ruo Mahadum Kocaeli
Turkey-ntà nsoro na iga Kocaeli Metropolitan Municipality ulaşımpark ya enyemaka, ngụkọta 12 si dị iche iche distrikti nke Kocaeli University (okporoko) 'Gịnị mere ndị ụgbọ ọrụ. Obodo Obodo na-enye ọrụ njem njem na Kocaeli site na bọs nke gburugburu ebe obibi nke 336. Metropolitan, 2019-2020 n'oge agụmakwụkwọ [More ...]
IETT General Directorate ga-akwado ọrụ ụgbọ ala ndị na-enweghị ụgbọala nke Istanbul Technical University na-ezube iwulite ya na ndị mmekọ ya na mba ụwa. Director IETT General Directorate, otu n’ime ndị mmekọ obodo Istanbul Metropolitan Municipal (IMM), bụ ihe nwere mmetụta maka gburugburu ebe obibi, ikike ọzọ na-eme ka ndụ obodo ukwu bụrụ ihe dị mfe. [More ...]
Ọzụzụ nke Studentsmụ akwụkwọ gbasara ịnya ụgbọ ala
Obodo Kahramanmaraş enyerela ụmụ akwụkwọ nọ na Erkenez ọzụzụ ịgba ígwè iji kwalite iji ụgbọ ịnyịnya eme njem n'ime obodo. Pmụaka ahụ sooro ndị nkuzi ha bata n'ụlọ akwụkwọ. 23-27 Septemba n'ime ogo nke 'Ka Anyị Jee Schoollọ Akwụkwọ site na Childrenmụaka' nke Ndị otu Obodo Na-ahụ Maka Ahụike wepụtara. [More ...]
Na 2009 Bozoyuk leghaara anya na ụgbọ okporo ígwè kwatuo na n'iyi ise njem na ọrụ ha site n'ikwu na ndị Republic of Turkey State Railways (TCDD) e sued mgbe abụọ ọrụ ikike 10 afọ. N'okwu na-aga n'ihu n'ihu Boz Boy Ask Assize Court, TCDD [More ...]
RayHaber Ozi Ntanye 02.10.2019
Allationwụnye Hanlı-Çetinkaya Osisi Nrụpụta Ntanetị Ala Nrụpụta Ala Dị N'agbata Durak Bucak Stations Yiri Railway na Akụkọ Ndị Ọzọ News Nwere Ike Inwe MmasịRayHaber 25.01.2019 Tender Bulletin 25 / 01 / 2019 Enweghị ndekọ ndekọ dị nro maka 25.01.2019 na sistemụ anyị.RayHaber 04.02.2019 [More ...]
Ọnụ ọgụgụ nke Ankarakart karịrị nde 6
Ọnụ ọgụgụ nke Ankarakart ejirila na ụgbọ njem ọha na eze na isi obodo karịrị nde 6. N'ime akwụkwọ nta Strategic Plan nke 2020-2024 nke EGO General Directorate, agụnyere ọnụ ọgụgụ nke Ankarakart dịka ụdị ha dị. Dabere na data sitere na EGO, 30 na June ngụkọta 6 nde na Ankara [More ...]
Nchọpụta Gọvanọ District Sırmalı na Edremit Çanakkale Highway
Edremit Çanakkale D550-06 Iji gbochie ụgbụ okporo ụzọ na-ewere ọnọdụ n'okporo ụzọ, a na-enwe nzukọ n'okpuru ndị isi oche nke Gọvanọ District Edremit Ali Sırmalı. Iji hụ na ntụpọ okporo ụzọ dị na mpaghara anyị nwere ntụsara ahụ na nchekwa, Edremit District Gọvanọ Ali [More ...]